KloudNote, mpamaky iray izay miaraka amin'ny lamaody kahie nomerika | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | mpamaky
Na dia efa elaela aza no nidina teny an-tsena ireo fitaovana misy efijery miloko sy fikirakirana matanjaka kokoa, ireo mpampiasa ny mpamaky dia toa tsy mijanona amin'ny fisafidianana azy io ary ny mpamokatra an'ireny dia misafidy fomba hafa mahomby kokoa.
Na dia tsy ela akory aza i Kobo dia nanolotra ny fitaovana vaovaony antsoina hoe Kobo Ellipsa, ny orinasa Geniatech dia nanolotra maodely mitovy amin'izany nefa miaraka amina fiasa sy fiasa fanampiny izay toa mahaliana.
Geniatech dia orinasa manana sinoa natsangana tany Beijing 24 taona lasa izay ary hita ao amin'ny teknolojia izy izao Faritra Shenzhen. Tao anatin'izay taona maro izay dia niahiahy tamin'ny fandefasana vokatra teknolojia isan-karazany ho an'ny mpanjifa farany izy ary miaraka aminy miaraka amina rindrambaiko milamina sy manokana. Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, Geniatech koa dia nifantoka tamin'ny tsenan'ny mpamaky mifandraika amin'ny lafiny misy azy amin'ny maha-fitaovana azy eo amin'ny tontolon'ny asa, tsena toa manintona ny sain'ny tsena atsinanana tato ho ato.
Geniatech dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fitaovany KloudNote izay azo vidiana sy tehirizina ao an-tranontsika ao anatin'ny andro vitsivitsy. ny Kloudnote dia mpamaky amin'ny endrika kahie nomerika, izany hoe efijery mitovy habe A4 ary ampiarahina amin'ny volo mba hanampiana anay hampiasa ilay fitaovana ho kahie nomerika.
Misy ny efijery an'ity fitaovana ity habe 10,3 " na inona no itovizany amin'ny tsena Espaniôla, habe folio (any amin'ny firenena hafa dia tsy mitovy ny haben'ny folio ary tsy mifanaraka amin'ny 10,3 santimetatra amin'ny efijery), mampiasa teknolojia efijery capacitive sy écran E-Ink Carta HD amin'ny famahana ny 1872 x 1404 teboka miaraka amin'ny 216 ppi. Malahelo ny efijery misy tara-pahazavana isika, saingy marina ihany koa fa raha mampiasa azy hanoratra isika dia tsy voatery ho olana amin'ireo hazavana ireo ny jiro.
Kloudnote dia tsy manana rafitra fikirakirana voafintina na tafiditra fa mampiasa Android 8.1, kinova vao tsy ela izay ahafahantsika manana fiasa fanampiny izay tsy ananan'ny fitaovana hafa.
Ny mpikirakira KloudNote dia mpikirakira sandry quadcore 1.2 GHz miaraka aminy 2 Gb ondrilahy karazana LPDDR4 izay hahatonga ny fihodinanan'ny pejy sy ny fiasa hafa ho malama kokoa. Ny fitehirizana Kloudnote dia 16 GB izay tsy azo velarina, farafaharatsiny amin'ny famaritana ny fitaovana tsy ilazana azy.
Ny fandrefesana KloudNote dia 250 x 175 x 7.6mm misy lanja 385 gr., mitombina ihany ho an'ireo izay te hampiasa azy io ho mpamaky ebook ary maivana ho an'ireo izay te hampiasa azy io ho fitaovana miasa.
Hatreto, ny toetran'ny KloudNote dia normal ary ambany noho ny fitaovana hafa eny an-tsena. Saingy tsy io ihany no ananan'i KloudNote, mbola misy ihany.
KloudNote dia mampiasa Android 8.1 ho rafitra fiasa eReader
Kloudnote dia manana bateria 4.000 mAh izay manome fizakantena tena lehibe tokoa. Ity bateria ity dia azo sarahina amin'ny alàlan'ny port usb-c izay ananany izay ahafahana mamaly haingana sy mamindra data. Ny fizakantenan'ny Kloudnote dia herinandro amin'ny fomba ofisialy miaraka amin'ny fampiasana adiny 2 isan'andro. Na izany aza, miankina amin'ny fampiasana omentsika azy io, na amin'ny fifandraisana Bluetooth na wifi na 4G no ampiasaintsika dia hitombo na hihena ny fizakan-tena, mihoatra ny herinandro na latsaky ny herinandro aza.
Ity seranana ity dia miaraka amina modely wifi-bluetooth izay ahafahantsika mifandray amin'ny Internet ary afaka mihaino boky audio amin'ny alàlan'ny headphone tsy misy tariby. Eo amin'ny faran'ny fitaovana dia hahita seranana minijack 3.5mm isika izay hahafahantsika mampifandray finday amin'ny alàlan'ny tariby ary amin'ireo fomba roa fihainoana endrika audio ireo dia tsy maintsy ampidirintsika ny safidy mpandahateny mahazatra izay ananan'i Kloudnote koa. Izany hoe, ny KloudNote ho fanampin'ny Bluetooth manana kara-peo ary koa manohana endrika endrika feo.
Ilay fitaovana koa dia miaraka slot ho an'ny fifandraisana 4GIzany hoe raha mampiditra karatra sim isika dia afaka mampiasa Internet na aiza na aiza.
Manana Android 8.1, ny karazana format izay tohanan'ny fitaovana dia tena malalaka ary na dia ao anaty antsipiriany aza dia miresaka momba ny fototra i Geniatech, afaka mieritreritra isika fa ny endrika ebook rehetra mifanentana amin'ny Android ary na ny fampiharana tranomboky malaza indrindra ho an'ny Android aza dia azo ampiasaina amin'ity fitaovana ity na dia aza miresaka mihitsy momba ny Play Store.
Mikasika ireo programa dia fantatray fa ho fanampin'ny mpamaky ebook dia nanatevin-daharana ny KloudNote programa fanamarihana sy rindranasa iray hampiakarana ny zava-drehetra amin'ny serivisy rahonao manokana izay mifanentana amin'ireo fitaovana hafa ary na dia fampiharana iray aza mba hananana ilay fitaovana ho toy ny mpanara-maso faharoa an'ny pc.
Amin'ity farany ity dia tsy mahafantatra mihoatra ny fampahalalam-baovao ofisialy izahay ary tsy fantatray raha hifanaraka amin'ny solosaina rehetra izany na mila tariby karazana USB-C izahay raha hampifandray azy saingy mahaliana izany. Ary tsy mahalala na inona na inona momba ny karazana rahona hampiasaintsika, ny fetrany (toy ny vidin'ny fampiasana an'ity serivisy ity) na raha mifanaraka amin'ny serivisy rahona malaza kokoa izay mamela antsika hanana ny zava-drehetra ao anaty milamina sy mifantoka amin'ny fomba.
Farany hiresaka momba ny Stylus aho. Ny stylus miaraka amin'ny fitaovana dia stylus fototra mifanaraka amin'ny KloudNote ary izany dia hahafahantsika manoratra, manisy tsipika ary manoratra eo amin'ny efijery fitaovana tsy misy olana. Fa koa, Geniatech milaza amintsika ny cFifanarahana fitaovana Wacom. Na dia tsy fantatsika tsara aza dia mety ho samy manana ny singa Wacom ny KloudNote sy ny stilosy ary manampy izany ny lanjany ho fitaovana matihanina tena mahaliana amin'ilay fitaovana. WACOM dia marika tena tsara sy malaza amin'ny takelaka sary sy fitaovana famolavolana ary fanaovana nomerika. Izany dia hahatonga ny fitaovan'ny KloudNote sy ny lahatsoratra hifanaraka amin'ireo programa WACOM hafa izay manampy lanja iray hafa amin'ilay fitaovana.
Ny vidin'ny Kloudnote dia $ 449 ary azo tehirizina amin'ny alàlan'ny pejy ofisialy. Na izany aza, mbola tsy fantatray hoe rahoviana no hisy ny daty famoahana sy fivarotana farany an'ity fitaovana ity, ary koa any amin'ireo firenena amidy hamidy.
Ny mpanamboatra Kloudnote dia nahalala ny fomba hikasika ireo lafiny mahaliana toy ny feo, ny fifanarahana amin'ny WACOM, ny Android 8.1 ho toy ny rafitra miasa na ny fifandraisana 4G ary maninona no tsy ny vidiny ihany koa. Ireo singa mahaliana izay manao ny fitaovana dia safidy tsara ho an'ireo izay mitady kahie nomerika mihoatra ny mpamaky. Saingy tsy fantatray ny daty fandefasana na ny tsena hahitana izany, koa dia mbola heveriko ihany fa mety tsy hahatratra an'i Eropa ity fitaovana ity na rehefa tonga dia hanao izany amin'ny fomba efa tonta. Raha tena mitady fitaovana mitovy amin'izany ianao ary manam-potoana, dia miandry ny fanombohana an'ity KloudNote ity aho, fa raha tena manana fotoana kely ianao dia misafidy ny Kobo Ellipsa o Mahavariana 2. Ary raha olana ny vidiny, dia azontsika atao foana ny mampiasa ireo kahie taratasy nomerika nentim-paharazana izay nojerena amin'ny finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » KloudNote, mpamaky iray izay miaraka amin'ny lamaody kahie nomerika
Onyx Boox Mira Pro, fanaraha-maso ranomainty elektronika ho an'ireo mitaky be indrindra